सोखले रोपिएको एउटा रुख, जसले वार्षिक पचास हजार दिन्छ - Arthatantra.com
अब १० रुपैयाँमा १० लाखसम्मको जीवन बिमा गर्न सकिने काठमाण्डौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले स्मार्ट जीवन बीमा योजना ल्याएको छ। दैनिक […]
विश्वको आधा सम्पत्ति आठ व्यक्तिको कब्जामा, हेर्नुहोस् कुन देशका नागरिक हुन् ती लन्डन। डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको उद्घाटन अगाडि सोमबार अक्सफामले विश्वका आधा […]
किसानलाई दिइएको करिब चार खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ ऋण मिनाहा गर्ने लखनऊ । भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले किसानलाई दिइएको करिब […]
सेयर बजारमा तपाई कुन वर्गको कम्पनीमा लगानी गर्दैहुनुहुन्छ ? काठमाण्डौं । अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेयर कारोबारका लागि सूचीकृत भएका […]
पर्यटन उद्योगबाट मात्रै तीन खर्बको कमाई न्होमपेन्ह। कम्बोडियाले सन् २०१६ मा करिब ५० लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई स्वागत गरेको […]
के तपाई पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ ? व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ ? काठमाण्डौं । गाउँका साना पर्यटन व्यवसायीहरुलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले […]